Apple kwetara na usoro ndụ nke iPhone bụ afọ atọ | Esi m mac
Apple kwetara na usoro ndụ nke iPhone bụ afọ atọ
Ọtụtụ ekwuola banyere ịka nká, mana ọ nweghị onye nrụpụta kwetara ya, ruo ugbu a, Apple, n'oge occasionbọchị Daywa que A ga-eme ya na Eprel 22, iji kpọsaa ihe bụ usoro ndụ iPhone, iPad na Mac.
Ndụ okirikiri, maka arụmụka
Ọ ga-abụrịrị na ụjọ atụla gị, ma wetuo obi, ọ dịghị njọ, ị ga-ahụ. N’ụbọchị nke Earthwa na mgbịrịgba na Apple, na mmekota na ọtụtụ ndị mmepe na WWF na-ebu, ebipụtakwala ụdị ndu nke ọ na-agwa ndị ọrụ banyere data dị iche iche na gburugburu ebe obibi na otu ụlọ ọrụ si enyere ya aka ilekọta ya, mana n'etiti ozi a, nke dọtara uche bụ nke metụtara usoro ndụ ngwaọrụ.
Apple kwetara na usoro ndụ nke iPhone bụ afọ atọmgbe ndụ okirikiri nke Mac bụ afọ anọ. Companylọ ọrụ ahụ eruola nkwubi okwu a site na ịlele akụkụ dị iche iche dị ka ike atụmatụ nke ngwaahịa ọ bụla na-ere, nkezi oge ojiji, wdg.
Iji gosipụta ojiji nke ndị ahịa, anyị na-atụle ike nke ngwaahịa na-eri mgbe ọ na-agba ọsọ na nke echepụtara. Usagekpụrụ ojiji kwa ụbọchị kapịrị ọnụ maka ngwaahịa ọ bụla ma bụrụ ngwakọta nke data ojiji ndị ahịa na-eme. Afọ eji, nke dabere na ndị nwe ya mbụ, echere na ọ ga-abụ afọ anọ maka ngwaọrụ OS X na TVOS na afọ atọ maka iOS na ngwaọrụ watchOS.
Nke a ọ pụtara na mgbe afọ atọ gị iPhone ga-na mberede na-akwụsị na-arụ ọrụ? Mba, tere ya aka. Mgbe anyị na-ekwu maka ya usoro ndụ nke ngwaọrụ, na nke a iPhone, iPad ma ọ bụ Mac, anyị na-arụtụ aka n'oge oge a kwuru na ngwaọrụ ga-arụ ọrụ na-enweghị mkpa maka onye ọrụ ọ bụla mmezi ma ọ bụ rụzie, ọ bụrụhaala na, n'ụzọ doro anya, ezubere ya maka iji ya eme ihe, ya bụ, anyị anaghị etinye ya na ngwa ndakwa nri iji hụ ma ọ ga-eguzogide ma ọ bụ tụba ya na korota si n'ala nke ise.
Mgbe oge a gasịrị, ngwaọrụ ahụ nwere ike ịchọ nrụzi, dochie ihe mejupụtara, na ihe ndị ọzọ.
Ugbu a, nke a abụghị ihe ngọpụ. Apple na-eme nnukwu mgbalị maka ilekọta gburugburu ebe obibi, anyị enweghị obi abụọ banyere nke ahụ, mana ọbụlagodi, nke a usoro ndụ Ọ dị ntakịrị ụkọ maka anyị, ọ bụ ezie na ọ dịkwa nnukwu karịa asọmpi ahụ.
Ì chere na Apple kwesịrị ịgbatị usoro ndụ nke ngwaọrụ ya? Apple enwere ike ịme karịa karịa ka ọ na-eme maka gburugburu ebe obibi?
Isi mmalite | Manzana
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple kwetara na usoro ndụ nke iPhone bụ afọ atọ
Mac minis ruru afọ 10 zuru oke, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na iji ezi uche, ndị si na 2015 ka na-arụ ọrụ na-enweghị mgbanwe ọ bụla.
Nwanyị Templar dijo
N'ụlọ anyị nwere IPad 1 na, ọ bụ ezie na o nwere IOS ochie, na-arụ ọrụ zuru oke, yana IPhone 3GS abụọ dị njikere ijigharị. Ewezuga nke mmiri gwụrụ ma rụzie ya, ọ dịbeghị mgbe ha nwara anara maka ọrụ ọrụ aka. Enwekwara m iPad 2 nke m emelitere. Echere m na onye ọ bụla gafeela afọ 3. Oh, na 2009 iMac nke na-egwuri egwu nke ọma na Onyeisi.
Zaghachi Lady Templar
Asier Eizagirre Ibarzabal dijo
M nwere iPhone 5s, ihe iPad 2 na lastly m nwere 27 5K iMac. IPad enwebeghị panache, ọ dị mma, mana iPhone na iMac nwere ike iwe ọtụtụ afọ.
Zaghachi Asier Eizagirre Ibarzabal
Jony Ive na-emepụta Yellow iPad Pro iji nweta ego maka ebe ngosi nka
Ihe patent Apple na-egosi trackpad nwere ike ịpụta na MacBooks n'ọdịnihu